Tattoos-ka Japan, baro inaad kala soocdo | Tattoo
Tattoos-ka Japan, baro inaad kala soocdo
Nat Cerezo | | Tattoo Oriental
ka sawir gacmeedka japanese badiyaa waxay ikhtiyaar u yihiin in la qoro labada magac iyo eray ee aynu leenahay xidhiidh gaar ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aynaan is ogeysiinin waxaan ku dambayn karnaa tattoo fool xun ama si xun u qoran ...
Waayo, waxaan diyaarinay qodobkan sawir gacmeedka japanese kaas oo aan ku bari doonno inaad ku kala soocdo labada manhaj ee afkan iyo kanjisyada.
1 Xarrago ee hiragana
2 Katakana, manhajkii qalaad
3 Kanjisyada, jilayaasha ka socda badda dhinaceeda kale
Xarrago ee hiragana
Hiragana waa nambarka koowaad ee ay Jabbaanku bartaan. Markii loo tixgeliyo kan ugu fudud, waxaa soo alifay dumarka dalkan markii aysan fursad u helin inay wax qoraan. Hiragana wuxuu kakooban yahay 46 xaraf oo sameeya shibbane (marka laga reebo codka n, kaas oo keligiis taga). Iyagu ma lahan qiime fikradeed, laakiin cod-hawleed, oo waxaa loo adeegsadaa oo keliya in la sameeyo ereyo dhan, laakiin sidoo kale sida jajabyo la socda shaqallo, sifooyin ...
Katakana, manhajkii qalaad
Katakana waa manhajka kale ee luuqaddan, waana mid ka mid ah xiddigaha taatikada ku qoran af jabaanka haddii aad rabto inaad ku qorto magacaaga, tusaale ahaan. Iyada oo si kadis ah loo garaaco iyo garaacis laba jibbaaran, isticmaalka katakana waa in lagu qoro ereyada qalaad iyo onomatopoeia. Si kastaba ha noqotee, ka soo horjeedka waxa ay u muuqan karto, katakana waxaa la soo saaray waqti hore, qarnigii XNUMXaad, qaybo ka mid ah jilayaasha Shiinaha.
Kanjisyada, jilayaasha ka socda badda dhinaceeda kale
Ugu dambeyntiina, kanjis waa qoraalka saddexaad ee aad ku kala sooci karto astaamaha Jabaan. Waxaa laga keenay Shiinaha, kanjiska Jabbaan waa adduun dhan: Kaliya uma adeegaan inay qoraan ereyo badan, laakiin sidoo kale magacyo habboon iyo, haddii aysan intaas ku filnayn, waxaa loogu dhawaaqi karaa siyaabo badan oo kala duwan! Si ka duwan hiragana iyo katakana, kanjisku waxay leeyihiin qiime fikradeed (taas oo mararka qaarkood suurtagal ay tahay in laga soo saaro macnahooda, laakiin maaha sida loogu dhawaaqo).
Waxaan rajeyneynaa hagahan inuu barto kala soocida astaamaha Jabaan. Noo sheeg, ma leedahay tattoo a luqaddan? Noo soo sheeg faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoo Oriental » Tattoos-ka Japan, baro inaad kala soocdo
Tattoo qabyaaladeed gacantiisa
Micnaha tattoo-yada ugu yar